News - Teknolojiyadaha muhiimka ah iyo rajada horumarka ee nidaamka kaydinta tamarta batroolka lithium
Teknolojiyadaha muhiimka ah iyo rajada horumarka ee nidaamka kaydinta tamarta batroolka lithium
Shabakadda Kaydinta Tamarta ee Polaris: 2017 Magaalooyinka Tamarta Internetka ee Horumarinta Internetka (Beijing) Madasha Mashruuca Tamarta Internetka ee Tamarta Dhismaha iyo Iskaashiga ayaa lagu qabtay Disembar 1, 2017 magaalada Beijing. Galabnimadii madasha farsamada, Jiang Jiuchun, oo ah madaxa Xarunta Tamarta Faa'iidooyinka Tamarta Qaranka ee R&D Center, ayaa khudbad ka jeedisay mowduuca: teknoolojiyadda ugu muhiimsan ee nidaamyada kaydinta tamarta batroolka.
Jiang Jiuchun, Agaasimaha Shabakada Teknolojiyadda Firfircoon ee Tamarta Firfircoon R&D Center:
Waxaan ka hadlayaa kaydinta tamarta bateriga. Jaamacaddayada Jiaotong waxay sameyneysay kaydinta tamarta, laga soo bilaabo nidaamyada korantada iyo gawaarida korantada illaa tareenka. Maanta waxaan ka hadlaynaa qaar ka mid ah waxyaabaha aan ku sameyno codsiyada nidaamka awood.
Tilmaamahayaga ugu waaweyn ee cilmi baarista: mid waa micro-grid midna waa batariga codsi. Codsiga batteriga, gawaaridii korantada ee ugu horreeyay waxaan ku isticmaalnay keydinta tamarta nidaamka korantada.
Marka laga hadlayo arrinta ugu muhiimsan ee keydinta tamarta batteriga, arrinta koowaad waa nabadgelyada; tan labaadna waa cimri dheer, ka dibna hufnaan sare.
Nidaamyada keydinta tamarta, waxa ugu horreeya ee laga fiirsadaa waa nabadgelyo, ka dibna hufnaan. U hoggaansanaanta wax-ku-oolnimada, xaddiga isbeddelada, iyo cimrigiisa, iyo sidoo kale isticmaalka tamar ka dib batteriga oo hoos u dhaca, ayaa laga yaabaa inaysan ahayn mushkilad la soo koobi karo xaalado badan. Muujiyeyaasha si ay u sharxaan, laakiin waxay muhiim u tahay keydinta tamarta. Waxaan rajeyneynaa iyada oo loo marayo dhowr waxyaabood, inaan ku xallin karno dhibaatada nolol aamin ah iyo hufnaan sare. Nidaamka kaydinta tamarta caadiga ah iyo nidaamka falanqaynta kaarka aqoonsiga heerka bateriga waxaa loo isticmaalaa baabuurta korantada iyo nidaamyada gaadiidka dadweynaha.
Waqtigan xaadirka ah, isticmaalka nidaamyada kaydinta tamarta, xakameynta burooyinka iyo santuuqyada qaybinta caqliga leh ee qof walba uu adeegsanayo, wuxuu wanaajinayaa guud ahaan dhaqaalaha iyo xasilloonida nidaamka, wuxuu sare u qaadaa qiimaha aasaasiga ah ee isku-darka nidaamka, wuxuuna saaxiibtinnimo u geli karaa daruuraha dambe. madal.
Kani waa jadwalka jadwalka jadwalka tamarta. Qaab dhismeedka qaabdhismeedkan ayaa si cad loo cadeeyay subaxnimadan, waxaanan ku gaari karnaa jadwal mudda dheer oo aan fiicneyn oo ah isku darin quwadaha tamarta keydinta tamarta badan iyo microgrids iyadoo la adeegsanayo kontaroolayaasha kala duwan.
Hadda waxaa loo sameeyay gole wasiir oo awood qaybsi caqli gal ah. Tani waa astaamaha aasaasiga ah ee golaha wasiirada qaybinta tamarta. Waxay ka kooban tahay howlo kaladuwan, sida dallacsiinta iyo sii deynta howlaha, ilaalinta tooska ah, iyo howlaha interface. Tani waa qalab caadi ah.
Xakameynta buundada wuxuu hirgaliyaa qalabka xudunta maareynta tamarta maxalliga ah, howlaha xog aruurinta ugu weyn, kormeerka, keydinta, istiraatiijiyadaha fulinta fulinta iyo gelinta. Halkaa waxaa ka jirta dhibaato u baahan cilmi baaris qotodheer oo qoto dheer oo ku saabsan heerka saamiga xog ururinta iyo waqtiga ururinta xogta marka xogta la soo dirayo. Sidan, falanqaynta xogta batteriga ee asalka batteriga ayaa la hirgaliyay, iyo dayactirka batteriga waxaa loo rogaa dayactir caqli leh. Samee xoogaa shaqo ah, aakhirka, intee la eg tahay tirada muunadaha, ama sida dhakhsaha u yahay kaydinta, si ay si buuxda ugu sharraxdo xaaladda batteriga ee hadda jira.
Haddii aan wado baabuur koronto, waxaad ogaan doontaa in gawaari badan oo koranto ah ay ku sugan yihiin xaalad inta badan isbeddelaan oo ku boodbooda. Xaqiiqdii, kaydinta tamarta ayaa wajahaysa isla dhibaatada ay ku hayaan codsiyada kaydinta tamarta nidaamka tamarta. Waxaan rajeyneynaa inaan ku xallinno xog ahaan. Waxaan leenahay cabbirka muunad BMS oo ku habboon.
Bal aan ka hadlo kaydinta tamarta dabacsan. Qof kastaa wuxuu dhahaa waxaan sameyn karaa 6,000 jeer, waxaana loo isticmaali karaa kun jeer. Way adag tahay in la sheego. Waad ka caawin kartaa sida nidaamka kaydinta tamarta, adoo sheeganaya 5,000 jeer. Waa imisa qiyaasta isticmaalka, sababta oo ah batteriga laftiisa ayaa leh dhibaato weyn, hoos u dhaca batteriga ayaa ah mid aan kala sooc lahayn inta lagu gudajiro nidaamka hoos u dhaca, batari walba si ka duwan ayuu hoos ugu dhacayaa, farqiga u dhexeeya unugyada unuguna wuxuu noqonayaa mid aad u kala duwan oo iswaafaqla'aanta soosaaraha soo saaraha. hoos u dhaca batteriga sidoo kale wuu ka duwan yahay. Intee in le'eg ayey tamarta kooxdan baytariyada isticmaali karaan oo tamar baa jirta? Tani waa dhibaato u baahan taxadar taxaddar leh. Tusaale ahaan, marka gawaarida korantada hada la isticmaalo, waxaa loo istcimaalaa 10 ilaa 90%, hoos udhaca ayaa kaliya u adeegsan kara 60% ilaa 70% ilaa xad, taasoo caqabado badan ku keenaysa keydinta tamarta.
Ma u adeegsan karnaa kooxaynta sida ku xusan sharciga burburka si loo sameeyo tanaasul, sidee u weyn tahay doorashada saxda ah ee lagu heli karo wax qabad wanaagsan iyo wax qabad wanaagsan, waxaan rajeyneynaa inaan ku kooxeyno si waafaqsan sharciga jabaqda baytariga, 20 laamood oo muuqan tahay waa ay aad uga habboon tahay ama 40 ayaa aad uga habboon, taas oo dheellitir ka dhigaysa wax ku oolnimada iyo korantada korantada. Marka waxaan wax ka qabanaa kaydinta tamarta dabacsan, oo sidoo kale ah mashruuceena inaan wax ku qabano. Dabcan, waxaa jira meel ka fiican oo lagu isticmaalo jawaannada cascades. Waxaan u maleynayaa in adeegsiga 'Cascade' uu leeyahay qiimo gaar ah labadii sano ee la soo dhaafay, laakiin waxay mudan tahay in la isticmaalo mustaqbalka, laakiin sidoo kale waxaan ka fikirnaa wax ku oolnimada dallacaadda iyo dallacaadda, mar haddii qiimaha batteriga uu hoos u dhaco, waxaa jira dhibaatooyin qaarkood oo la xiriira xakamaynta. Kooxda oo is bedbeddela ayaa xallin karta dhibaatooyinka waaweyn. Nooc kale oo modularity sare ah ayaa hoos u dhigaya qiimaha nidaamka oo dhan. Midka ugu weyn ayaa hagaajin kara heerka isticmaalka.
Sida baytariga loo isticmaalo baabuurka saddex sano kadib, hoos udhaca ayaa ka yar 8%, iyo heerka adeegsiga oo keliya 60%. Waxaa u sabab ah kala duwanaanshaheeda. Haddii aad sameyso 5 qaybood oo ah heerka isticmaalka, waad ku guuleysan kartaa 70%, taasoo hagaajin karta heerka isticmaalka. Isku xidhka qaybo ka mid ah baytariyada sidoo kale waxay horumarin karaan isticmaalka batteriga. Dayactirka kadib, kaydinta tamarta ayaa kordhay 33%.
Markaan fiirinayo tusaalahan, ka dib isku-dheellitirka, waxaa lagu kordhin karaa 7%, ka dib marka koox la beddelo, waxaan ku kordhay 3.5%, iyo isku dheellitirka wuxuu kordhin karaa 7%. Isku-duubnikaro dabacsan wuxuu keeni karaa faa iido. Xaqiiqdii, sababta keentay hoos udhaca soosaarayaasha warshadeeyayaasha ayaa ka duwan. Waa lagama maarmaan in horay loo ogaado waxa kooxdan baytariyada ay noqon doonaan ama waxa ay noqonayso qeybinta xuduuda, ka dibna waxaad sameyn doontaa kobcinta bartilmaameedka.
Kani waa qorshe la qaatay, cutubku wuxuu si buuxda u leeyahay awood madax-bannaan oo hadda ah, kaas oo aan ku habboonayn codsiyada awoodda sare.
Qayb ka mid ah awooda moduleka waxaa si madaxbanaan u maamusha hadda. Wareegtani waxay ku habboon tahay dhexdhexaadka iyo sare ee korantada iyo isticmaalka soo noqnoqda. Kani waa xalka kaydinta bateriga MMC ee ku habboon korantada iyo awoodda sare.
Sidoo kale ku saabsan falanqaynta xaaladda batteriga. Waxaan had iyo jeer is idhi awooda batteriga waa mid isbarbar socda, hoos udhaca ayaa ah mid aan kala sooc lahayn, gabowga batteriga waa mid iswaafaqsan, oo awooda iyo iska caabinta gudaha ayaa aad u yaraatay. Adigoo adeegsanaya qaaciddada si lagu garto, waxa aad u isticmaasho waa awooda iyo iska caabbinta gudaha. Haddii aad rabto inaad hesho hab aad ku ilaaliso joogteynta, waxaad u baahan tahay inaad qiimeyso kala duwanaanshaha SOC ee batari kasta, sida loo qiimeeyo SOC ee unugkan, ka dibna waxaad dhihi kartaa sida baytarigan aan la jaan qaadi karin iyo inta awoodda ugu badan ay noqon karto . Sidee loo helaa hal SOC adoo kusii hayn kara batteriga SOC? Habka hadda jira waa in lagu meeleeyo BMS nidaamka batteriga isla markaana qiyaasta SOC-ka khadka tooska ah waqtiga dhabta ah. Waxaan rabnaa inaan si kale ugu sharaxno. Waxaan rajeyneynaa inaan ku wadno xogta muunaddan dambe. Waxaan falanqeynaa batroolka 'SOC' iyo batteriga iyada oo loo marayo xogta asalka. SOH, kor u qaad batteriga taas oo ku saleysan salkan. Sidaa darteed, waxaan rajeyneynaa in xogta batteriga gawaarida, ee aan aheyn xog weyn, ay tahay goob xog aruurin ah. Iyada oo loo sii marayo barashada mashiinka iyo macdan qodista, qaabka qiyaasta SOH waa la ballaariyey, iyo istiraatiijiyad maareyn oo loogu talagalay lacag buuxda iyo siideynta nidaamka batteriga ayaa la bixiyaa iyadoo lagu saleynayo natiijooyinka qiyaasta.
Kadib markii xogtu soo baxdo, faa iido kale ayaa jirta, waxaan sameyn karaa digniin hore xaalada caafimaad ee baytariga. Dabka beytarigu wali si joogto ah ayey u dhacaan, nidaamka kaydinta tamartuna waa inuu ahaadaa mid amaan ah. Waxaan rajeyneynaa inaan sameyno xog-waqtiga dhabta ah iyo digniinta ugu horayso iyo muddada dheer digniinta hore iyadoo la adeegsanayo falanqaynta xogta asalka, helitaanka qaababka digniinta ee muddada-gaaban iyo muddada-dheer ee loogu talagalay khataraha amni ee imaan kara, iyo ugu dambeyntii la wanaajiyo amniga iyo isku halaynta nidaamka oo dhan.
Iyada oo tan loo marayo, waxaan ku gaari karaa dhowr dhinac dhinac weyn, mid waa in la kordhiyo heerka isticmaalka tamarta ee nidaamka, tan labaad waa in la kordhiyo nolosha batteriga, tan saddexaadna waa in la hubiyo nabadgelyada, iyo nidaamkan keydinta tamarta ayaa sifiican ugu shaqeyn kara .
Immisa xog ah ayaan u baahanahay inaan soo geliyo si aan u buuxiyo shuruudahayga? Waxaan u baahanahay inaan helo batteriga ugu yar ee la kulma xaalada batteriga ee socda. Xogtan waxay taageeri kartaa falanqaynta gadaasha, xogtu kama badnaan karto, qadar aad u weyn oo xog ah ayaa dhab ahaantii aad u weyn oo ka socda shabakadda oo dhan. Daraasiin kun oo ilbiriqsiyo, waxaad qaadataa volta iyo hadda bater kasta, oo aan la qiyaasi karin markii aad ugu gudubto asalka. Waxaan helnay jid hadda, waan kuu sheegi karnaa, inta jeer muunad qaadidda muunad ahaantu ay tahay, maxay tahay xogta astaamaha ee aad u baahan tahay inaad gudubto Waxaan si fudud u cadaadinaynaa xogtan, ka dibna aan u gudbinnaa shabakadda. Xaddiga qalooca baytariga waa hal milise oo mitir, taas oo ku filan in lagu haqabtiro baahiyaha qiimeynta batteriga. Diiwaangelinta xogteenna waa mid aad iyo aad u yar.
Kii u dambeeyay, waxaan nidhi BMS, qiimaha kaydinta tamarta ayaa ka muhiimsan qiimaha batteriga. Haddii aad ku darto dhammaan howlaha oo dhan BMS, ma dhimi kartid qiimaha BMS-ga. Maaddaama xogta la soo diri karo, gadaal gadaal ayaa laga heli karaa madal falanqayn xoog leh leh. Waan fududayn karaa hore. Horta waxaa ku yaal kaliya muunad ururinta xog ama difaac fudud. Samee xisaab SOC ah oo aad u fudud, xog kale ayaa laga soo diraa asalka, tani waa waxa aan hadda sameyno, qiyaasta gobolka oo dhan iyo muunad ka qaadista BMS ee hoos ku xusan, waxaan u gudbineynaa xakameynta kaydinta tamarta tamarta, ugu dambeyntiina waxaan u gudbinnaa shabakadda, tamarta. kaydinta Koontaroolka noode wuxuu lahaan doonaa algorithm gaar ah, waxyaabaha soo socdaa waa aasaaska ogaanshaha iyo isleegista. Xisaabinta ugu dambeysa waxaa lagu sameeyaa shabakadda asalka. Tani waa habka dhismaha oo dhan.
Aynu eegno wax ku oolnimada iyo fududeynta isbeddelka lakabka hoose, oo ah isbarbardhig, helitaanka korantada hooseysa iyo helitaanka isleegta iibsashada hadda jirta. Xakameynta kaydinta tamarta korantada wuxuu sheegayaa soo socda sida loola macaamilayo, marka lagu daro SOC-da ayaa lagu sameeyaa halkan, asalkuna mar labaad ayuu shaqeeyaa. Tani waa dareemaha caqliga leh, unug maareynta batteriga, iyo koontaroolada caqliga leh ee aan horeyba uga shaqeyneynay, taas oo si weyn hoos u dhigeysa qiimaha kaydinta tamarta.
Waqtiga boostada: Jul-08-2020
3.6v Bathiil Lithium-Ion, Xidhmada Aaladda Batteriga, Batroolka 20ah Lithium Ion, Xidhmada Aaladda Batroolka Lithium, Unugyada Baytariyada Lithium Ion, Battery Lithium Batteriga,